ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သြဂုတ်လကို ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်ခြင်း”
ခု ကျော်ဇေယျ...ရုပ်ခံကြီးနဲ့ ပွင့်ထွက်လာပြီ..
ဘေးမှာလည်း ပန်းဘုရင်မလေးနဲ့ ပေါ့လေ...
ဒါကြောင့် မျက်နှာကြီးက ပြုံးနေတာ...
ရုပ်ကလေးက စွာ တယ်လို့ မထင်ရဘူးနော်။
(မဒမ်ပေါ ကိုပြောတာ မဟုတ်)
အဝေးက ကြည်ညိုနေသူတဦး လာကြည့်ရှုသွားပါတယ်။
Justapiece of beautiful lyrics of " WE SHALL OVERCOME " !
"...deep in my heart..I do believe...someday we'll all be free... Someday..We..All Be..Free...We..Shall..overcome...someday. ..."
မဒမ်ပေါက ချစ်စရာ ကြီး .. ဒါ့ကြောင့်လဲ ကိုပေါက... ဒန် တန် တန်...
တနေ့ အောင်ပွဲ ခံရမည်။
Oh.. So Cute… ကိုယ့်ညီမလေးကို ပြောတာနော်… အဲဒီစုံတွဲ ပုံလေးကို ပြက္ခဒိန်တောင် ထုတ်လိုက်ချင်တယ်…
ကိုပေါတို့နှစ်ယောက်လုံး တယ်ချောနေပါလား။ မမ၀တ်ထားတဲ့ပုံစံလေးက လှတယ်။ ဟာဝိုင်ယီပုံစံကို သဘောကျတယ် :)
ကိုပေါကို အခုမှ သေသေချာချာ မြင်ဘူးတယ်....
မိုးဒီနဲ့ ရုပ်ဆင်တယ်နော်...... အရပ်ပဲကွာတယ်.... အလောင်းလှတာပေါ့...... :P
atwhin ma tu ein thu ma hpit pa.
Glad to see both of you n very nice.
Sure one day we all overcome.